Liverpool waa in ay bixisaa £90m si ay ula wareegto ‘Lionel Messi-ga Goolhayeyaasha’ | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Liverpool waa in ay bixisaa £90m si ay ula wareegto ‘Lionel Messi-ga Goolhayeyaasha’
Liverpool waa in ay bixisaa £90m si ay ula wareegto ‘Lionel Messi-ga Goolhayeyaasha’
Liverpool waxaa looga fadhiyaa in ay jebiso rikoodhkeeda dhanka Suuqa ah, haddii ay doonayaan in ay la saxiixdaan Goolhayaha kooxda Roma, Alisson Becker kaasoo suuqa soo socda ay ku qaadan karaan £90milyan sida ay kooxdiisu sheegtay.
Laacibka dalka Brazil ayaa ninka ay isku qaranka yihiin wuxuu ka tirsanyahay Manchester City waana laacibka Ederson kaasoo ku fadhiya £34.7m oo ay suuqii hore kusoo iibsadeen, waana goolhayaha ugu qaalisan kubadda Cagta Taariikhda.
Waxaase muuqata in Alisson uu noqon doono kan ka qaalisan sida uu wariyay Calciomercato.
Laacibka 25-jirka ah, kaasoo lagu qeexo in uu yahay ‘Lionel Messi-ga Goolhayeyaasha’ sida uu sheegayo macallinka Roma ee Roberto Negrisolo, kaasoo suuqii lasoo dhaafay ku sigtay in uu ka tago Serie A kooxda ka ciyaarta.
Keddib Wojciech Szczesny oo aaday Juventus, Alisson ayaa qabsaday Safka koobaad ee kooxdiisa, wuxuuna rajo wacan ka qabaa in uu ciyaaro Koobka Adduunka, wuxuu yiri: “Kani waa Sanadkeygii ugu Muhiimsanaa kubadda cagta ma doonayo in aan tago, balse waan jeclahay in kooxo badan oo waaweyn ay isoo dalbadaan.